Archive du 25-nov-2021
May ny Biraon’ny CNRE sy CNRIT Asam-piakarohana maro no potika sy rava
Nirehitra omaly alarobia 24 novambra 2021 maraina tokony ho tamin'ny 3 ora sy sasany mahery tany ho any ny trano iombonan'ny CNRIT (Centre National pour la Recherche Industrielle et Technologique)
Difotry ny zava-misy, be balarora
Difotry ny zava-misy tanteraka ny fitondrana, tsy tena mahita izay horaisina eo anatrehan’ny olana sesilany miseho eto amin’ny firenena. Ny eo tsy tena mivaha, ny eo misosoka ihany.
Filankevitra ambony momba ny demokrasia “Aoka izay ny fifidianana mamitaka ”
Ampiakarina ankehitriny ny maripana politika, hoy ny filohan’ny filankevitra ambony momba ny demokrasia sy ny tany tan-dalana na HCDDED,
Jejy Music Orchestra & Choir Raikitra ny hetsika ny “Mkato i Madagasikara”
Raikira ny hetsika lehibe “Mkanto I Madagasikara” karakarain’ny “Jejy Music Orchestra & Choir”, ivon-toerana manofana sy mampianatra mitendry mozika sy zava-maneno.
Fahamaizana sesilany Nirehitra hatramin’ny fananan’ny Amiraly
May ny faritry tanin'ny Filoha teo aloha efa nodimandry Amiraly Didier Ratsiraka ao Antanagnambo Toamasina, araka ny vaovao azo omaly.
Raharaha volamena 73,5 kg “ Navoaka ny fonja ny Tale iray tao amin’ny STA ”
“Raharaha « Volamena 73,5kg » : Navoaka tao am-ponjan’i Tsiafahy ny Tale iray tao amin’ny STA”, hoy ny famoaham-baovao nataon’I Patrick Raharimanana omaly.
Sakorokoka tetsy Anosy Fiarana Depiote, nisy nanaraka sy nibahana…
Nisehoana “scandale” na toe-javatra hafahafa mikasika olona ambony indray tetsy Anosy ny alin’ny talata 23 novambra manodidina ny tamin’ny 9 ora alina tany ho any.
Halatra finday Tovolahy iray no tratra teny amin’ny 67 ha
Tovolahy iray 19 taona no tratra teny amin’ny 67 ha afak’omaly Talata 23 novambra tokony ho tamin’ny 4ora hariva rehefa avy nangalatra finday.
Marary ny fampianarana ambony Manamafy fa tsy hanao “ora fanampiny” ny SECES Tana
Marary tanteraka ny tontolon’ny fampianarana ambony miankina amin’ny Fanjakana. Nanamafy Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona ao amin'ny SECES Sampana Antananarivo